China T140-1 Bulldozer Emeputa na Nweta | Shehwa
Ọ nwere njirimara nke nkwusioru nke isii, akụrụngwa igwe. Isi ipigide na-haịdrọlik elu. Site na onye na-anya ụgbọ mmiri na-achịkwa, nlekota eletrik, ọdịdị dị mma, a na-ejikarị ya eme ihe n'okporo ụzọ, iwu mmiri-eletriki, mgbanwe mpaghara, ọdụ ụgbọ mmiri na mmepe m na ...
Ọ nwere njirimara nke nkwusioru nke isii, akụrụngwa igwe. Isi ipigide na-haịdrọlik elu. Site na onye na-anya ụgbọ mmiri na-achịkwa, nlekota eletrik, ọdịdị dị mma, a na-ejikarị ya eme ihe n'okporo ụzọ, iwu mmiri-eletrik, mgbanwe mpaghara, ọdụ ụgbọ mmiri na mmepe m na ihe ndị ọzọ.